Ethereum Inona izany ary ahoana no fomba hividianana ny Ethers? Ny rehetra momba ny sakana | Vaovao momba ny gadget
Ny Etherum dia tsy safidy hafa amin'ny Bitcoin, fa kosa dia sehatra iray manararaotra ny teknolojia blockchain (ampiasain'ny Bitcoin) tsy hoe hanolotra fomba hafa fandoavam-bola hafa mitovy amin'ny Bitcoin, Ether, saingy sehatra fampivelarana rindrambaiko izay manampy amin'ny famoronana rafitra cryptocurrency izay mizara rojom-baravarana, fantatra kokoa amin'ny hoe blockchain, izay tsy azo ovaina na ovaina na oviana na oviana ireo firaketana miditra.
Fa raha ny mahaliana anao no tokony ho fantatra Raha i Ethereum dia mpisolo toerana an'i Bitcon, ny valiny dia tsia. Ny safidy hafa amin'ny Bitcoin izay atolotry ny Ethereum antsika dia antsoina hoe Ether, sehatra iray ankoatra ny tetik'asa Ethereum izay holazainay aminao ny zava-drehetra eto ambany hahafantaranao ny fomba fiasa sy ny ny fomba hividianana Ethereum.
Raha te hividy Ethereum ianao izao, mahazo $ 10 MAIMAIMPOANA amin'ny fividiananao amin'ny fipihana eto
1 Inona ny Ethereum?
2 Inona ny atao hoe Etera?
3 Iza no namorona an'i Ethereum?
4 Ny safidy hafa amin'ny Bitcoin
5 Ahoana no hividianana Ethereum?
6 Inona no atao hoe blockchain?
7 Fifanarahana marani-tsaina
8 Misy ve ny varotra cryptocurrency?
Araka ny efa nanamarihako tetsy ambony, ny Ethereum dia tetikasa iray manambatra vola nomerika, Ether, toa ny Bitcoin, fa manararaotra ireo fahafaha-manolotra omen'ny blockchain, firaketana tsy azo ovaina ary hatramin'ny nahaterahan'i Ethereum dia natsangana ho amin'ny famoronana fifanarahana hendry. Ny fifanarahana marani-tsaina, amin'ny ankapobeny, dia misy fiasa ara-bola, mihetsika amin'ny fomba mangarahara ho an'ny roa tonta izy ireo ary ny fiasan'izy ireo dia mitovy amin'ny kaody fandaharana. Raha manao an'izany izy ireo. Izany hoe raha mitranga izany dia tsy maintsy ataonao hafa na eny na eny.
Mahazoa $ 10 mividy MAIMAIMPOANA amin'ny fikitihana eto
Ireo fampahalalana rehetra ireo dia hita taratra ao amin'ny blockchain, firaketana tsy azo ovaina izay taratry ny asa rehetra, na amin'ny fivarotana na amin'ny fividianana vola madinika, fifanarahana hendry ... Ny fampahalalana voatahiry ao amin'ny blockchain's platform dia azon'ny rehetra jerena ary azo jerena amin'ny solosaina rehetra mandrafitra ny tamba-jotra Ethereum. Ny fiasan'ny sakana bitcoins dia mitovy amin'ny azy, saingy ny angon-drakitra fifanakalozana ihany no voarakitra ao, satria ny mety atolotry ny teknolojia ity dia tsy nitatra.
Inona ny atao hoe Etera?
Ny sehatra Ethereum dia tsy vola. Ny Ether dia vola an'ny sehatra Ethereum, ary ahafahantsika mandoa vola amin'ny olona amin'ny entana na serivisy. Ny Ether dia iray hafa amin'ny vola crypto hita eny an-tsena izay natomboka mba hifaninana amin'ny Bitcoins, saingy tsy toy ny farany, i Ether dia tafiditra ao anaty sehatra iray izay manararaotra ny blockchains, fantatra amin'ny anarana hoe blockchain.
Ether, toy ny Bitcoin ihany dia tsy fehezin'ny rafitra ara-bola, noho izany ny sandany na ny teny nindramina dia tsy mifandray amin'ny tahiry, trano sy vola. Ny lanjan'i Ether dia voafaritra amin'ny tsena misokatra araky ny fividianana fividianana sy fivarotana misy amin'izao fotoana izao, noho izany dia hiova amin'ny fotoana tena izy ny vidiny.
Tianao Maimaimpoana $ 10 rehefa mividy ny EtH-nao? TSARA tsindrio eto
Raha voafetra ho 21 tapitrisa ny isan'ireo Bitcoins, Tsy voafetra ny Ether, noho izany ny vidiny dia 10 heny ambany ambany noho ny Bitcoins ankehitriny. Nandritra ny fivarotana mialoha izay niseho talohan'ny nanombohan'ny Ethereum, 72 tapitrisa Etera no noforonina ho an'ireo mpampiasa rehetra izay nandray anjara tamin'ny alàlan'ny sehatra Kickstarter ho an'ilay tetikasa sy ho an'ny fototra Ethereum, izay hitantsika fa manome antsika zava-dehibe kokoa fiasa. ary sarobidy. Araka ny fehezan-teny namboarina nandritra ny famarotana mialoha ny taona 2014, ny famoahana ny Etera dia voafetra ho 18 tapitrisa isan-taona.
Te hampiasa vola amin'ny Ethereum ve ianao?
Tsindrio ETO raha hividy Ethers
Iza no namorona an'i Ethereum?
Tsy toy ny Bitcoins, ny mpamorona an'i Ethereum dia manana anarana sy anarana farany ary tsy miafina. Vitalik Buterin dia nanomboka ny fampandrosoana Ethereum tamin'ny faran'ny taona 2014. Mba hamatsiana ara-bola ny fampandrosoana ny tetikasa, Vitalik dia nitady famatsiam-bolam-bahoaka ary nanangona vola 18 tapitrisa dolara mahery. Talohan'ny nifantohany tamin'ny tetikasa Ethereum dia nanoratra tamin'ny bilaogy samihafa momba ny Bitcoins i Vitalik, tamin'izay fotoana izay no nanomboka nanamboatra ireo safidy azon'ny teknolojia mampiasa Bitcoin natolotra azy izy ary mandra-pahatongan'io fotoana io very fotsiny.
Ny safidy hafa amin'ny Bitcoin
Amin'izao fotoana izao eny an-tsena dia afaka mahita safidy maro hafa amin'ny Bitcoin tsitoha isika, saingy rehefa mandeha ny fotoana, io isa io dia nihena be tokoa Etera, Litecoin ary Ripple ho toy ny solo-tena ampiasain'ny mpampiasa. Ny ankamaroan'ny fahombiazana izay ananan'i Ether, dia noho ny tetik'asa Ethereum rehetra ao aoriany, satria raha safidy hafa fotsiny io, dia tsy ho vitany ny hihazona ny ampahefatry ny fiasa izay tanterahina manerantany miaraka amin'ny vola crypto. , izay manjaka Bitcoin miaraka amin'ny 50% amin'ny varotra.
Ahoana no hividianana Ethereum?
Avy eo dia hanazava isika ny fomba hividianana Ethereum Na ny tena marina, ny fomba hividianana Ethers izay anaran'ny cryptocurrency.
Fifaninanana mivantana avy amin'i Bitcoin, hahafahana miditra tanteraka amin'ny famoronana Ethers mila solosaina mahery, fifandraisana Internet ary rindrambaiko ilaina isika hahafahanao ho lasa ampahany amin'ilay tambajotra mampifangaro azy, ary amin'izany manomboka mahazo an'ity karazana vola nomerika ity. Rehefa dinihina ny Bitcoin dia nanomboka niasa tamin'ny taona 2009, ny fampiharana sy ny fork samihafa izay hitantsika eny an-tsena dia miasa amin'ny fahafaha-miasa tanteraka, zavatra iray izay tsy azontsika lazaina momba an'i Ethereum amin'izao fotoana izao.
Azontsika atao ihany koa ny misafidy ny lalana haingana ary mividy Ethereum mivantana ity vola ity amin'ny alàlan'ny serivisy toy ny Coinbase, serivisy mamela antsika hitahiry soa aman-tsara ihany koa ny vola crypto misy antsika.
Vidio ny Ethers
Inona no atao hoe blockchain?
Mba hanazavana ny tombony omen'ny Ethereum antsika, tsy maintsy miresaka momba ny blockchain isika, ilay protokolola ampiasaina hitantanana ny firaketana rehetra sy ny asa izay tanterahina miaraka amin'i Ether, protokol mitovy ampiasan'ny Bitcoins fa izay nomen'izy ireo fitaovana ilaina lehibe kokoa izay manome fiarovana.
Blockchain dia fisoratana anarana izay itehirizana ny fampahalalana rehetra mifandraika amin'ny fividianana crypto. Ny cryptocurrency tsirairay dia mampiasa rejistra samihafa. Ity firaketana ity tsy azo ovaina na ovaina amin'ny fotoana rehetra ary hitan'ny rehetra ihany koa io, ka afaka miditra ao ny olona. Ny fiarovana amin'ny fanovana atolotry ny blockchain antsika dia ny hasiny lehibe satria izy ireo dia azo ampiasaina hamoronana Smart Contract.
Misaotra an'i Ethereum afaka manao fifanarahana amin'izany ianao raha tanteraka ny fepetra voasoratra dia ho tanteraka izy ireo na raha mandeha ho azy tsy misy olona fahatelo mila manome ny mialoha. Ny fifehezana ny fepetra ho tratrarina dia azo fidina amin'ny loharano napetraky ny roa tonta. Ny rafitry ny banky dia iray amin'ireo liana indrindra amin'ny fahazoana mampiasa ity karazana fifanarahana ity hanamorana ny fifanarahana fametrahana sy ny hafa miaraka amin'ny mpanjifa, satria hialana amin'ny hadisoana mety hitranga amin'ny olombelona ankoatry ny famelana ny asa mahaleo tena.
Alao an-tsaina hoe manana portfolio fiarovana ianao izay nametrahanao ny fepetra fa raha ny vidin'ny fiarovana iray dia mahatratra ny isa X dia mivarotra ho azy ireo. Miaraka amin'ny fifanarahana maranitra Ethereum tsy misy olona mila miditra an-tsehatra, Tsy misy olona tokony hahalala ny vidiny amin'ny fotoana rehetra handrosoana hivarotra ny fizarana rehefa mahatratra sanda iray izy ireo.
Na dia mijery sy tena tsara tarehy aza ny zava-drehetra, dia tsy maintsy entina ao an-tsaina fa tsy azo ovaina ity karazana fifanarahana ity, ka raha vao tafiditra ao amin'ny rejisitra raha afaka manafoana ianao raha misy fepetra napetraka mamela izany. Tsy azo ovaina ihany koa ny fe-potoana nifanarahana, satria tahaka ny efa nanamarihako ny blockchain dia rakitsoratra izay tsy azo ovaina na ovaina amin'ny fotoana rehetra.
Misy ve ny varotra cryptocurrency?
Tahaka ny karazan'entana hafa rehetra, ny vola crypto dia mora tratran'ireo miboiboika izay mampiakatra ny vidiny mihoatra ny tena sandany. Amin'ny trangam-bola crypto, ny fitadiavana bala mety hitranga dia asa sarotra kokoa noho ny amin'ny karazana fananana hafa hatramin'izay saika tsy azo atao ny mamaritra ny tena lanjan'ilay zavatra ethereal toy ny cryptocurrency. Ny soatoavin'ny Etera dia voafaritry ny lalàn'ny famatsiana sy ny fangatahana, arakaraky ny isan'ny olona mividy Ethers, no vao mainka miakatra ny vidiny ary ny mifamadika amin'izany, izay mety hahatonga ny vidiny ankehitriny hisy fiantraikany mafy amin'ny mpandinika izay mividy sy mivarotra vola crypto mieritreritra fotsiny ny manombatombana amin'ny vidiny. Tombony iray ananan'i Ether mihoatra ny Bitcoin dia ny habetsany dia tsy voafetra ho 21 tapitrisa fa ny 18 tapitrisa ether dia mivoaka isan-taona izay hanampy amin'ny famerana ny fiakaran'ny vidim-piainana.
Na izany aza, sarotra ny hahafantarana raha tena miatrika bubble isika na tsia, satria mihevitra izany ny manam-pahaizana sasany ao anatin'ny 5-10 taona ny vidin'ny Etera dia mety ho avo mihoatra ny 100 heny noho ny ankehitriny izay manondro fa mbola manana dia ambony mankany ambony izy io.
Raha nandresy lahatra anao i Ethereum ary te ho anisan'ity cryptocurrency ity ianao, Eto ianao dia afaka mividy Ethers. Mbola tsy nahazo famporisihana ve ianao mividy Ethereum?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » teknolojia » Ethereum Inona izany ary ahoana no fomba hividianana ny Ethers?
GuideEthereum dia hoy izy:
Ethereum! Vola goavambe tokoa, amin'ny tiako ny azo antoka na amin'ny vinavina bebe kokoa ny tontolo iainana cryptocurrency
Efa nividy ny ETH 🙂 aho
Mamaly an'i GuiaEthereum
Francisco Villarreal Guijo dia hoy izy:
Liana amin'ny fampiasam-bola amin'ny Ethereum aho. Ohatrinona ny vola farafahakeliny tokony hampiasaina ary ahoana no fomba hahitako ny fampiasam-bola?
Miarahaba F. Villarreal
Valiny tamin'i Francisco Villarreal Guijo
Liana amin'ny fampiasam-bola amin'ny Ethereum aho. Ohatrinona ny fatra farany ambany hividianana ethereum ary ahoana ny famerenana amin'ny laoniny ny fampiasam-bola.